जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु के के छन् ?
काठमाडौँ । सरकारले जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जथ १० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु बुधबार सार्बजनिक
काठमाडौँ । सरकारले जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्बजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सोमबार सार्बजनिक गरेका
निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीको निधन भएमा परिवारलाई २० लाख दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई रु २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रस्तावमा आज
बैशाख १८ गतेको मन्त्रिपरिषदले के के निर्णय गर्यो ?
काठमाडौँ । बैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्बजनिक भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारका निर्णय सार्बजनिक गरेका हुन् । सरकारले नेपाल प्रहरीको